Irreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame - BBC News Afaan Oromoo
Irreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame
1 Onkololeessa 2017
Irreechi bara 2017, jala bultii irraa eegalee rakkoo nageenyaa malee kabajamus, sirbootni mormii fi dhaadannoowwan mootummaa balaaleffatan ciminaan irratti dhagaahamanii jiru.
Roobni ganamaan magaala Bishooftuutti roobaa turu illeen hirmaattoota ayyaana Irreechaa miliyoonaan lakka'aman iddoo horaatti walitti qabamuu hin dhorkine.
Abbootiin gadaa imala miilaa sa'aatii tokkoof walakkaa booda, ganama keessaa sa'aatii 1:30 irratti hora Harsadee gahan.
Waltajjiin ganama subiirraa eegalee dargaggoota mootummaa irratti dhaadannoowwan balaaleffannaa dhageessisaa turaniin waan dhuunfatameef, Abbootii Gadaa kan affeeru hin turre.
Mormii cimaan kan irratti dhagaahame ture
Abbootiin Gadaas erga horatti irreeffatanii booda kallattiin gara dhufanitti deebi'aniiru.
Humni mootummaa meeshaa waraanaa hidhatees ta'e, hin hidhatiin bakka sirinchaatti hin argamne.
Poolisiin Oromiyaa iddoo irreechaa irraa tilmaamaan amma kiloomeetira lamaa fagaachu turan. Isaanis meeshaa waraanaa kan hin hidhannee fi tasgabbiidhaan nageenya hordofaa akka turan, Bishooftuu irraa ayyaanicha hordofaa kan ture rippoortarri BBC gabaasee jira.
Irreechaa baranaa irratti humni waraanaa hin argamu
Ayyaanni Irreechaa bara 2017 suuraan yoo ibsamu
Magaala Sabbataa irraa kan dhufe dargaggoo Alamuu Araggaa, ayyaanni irreechaa bara kanaa gammachiisaa ta'uusaa riportara keenyatti himee jira.
"Ayyaanni irreechaa bara kanaa yaadannoo gaddisiisaa bara darbeen faallaa kan ta'e fi nagaa qabeessaa" kan jette ammoo godina Arsii Lixaa, aanaa Shaashamanee irraa kan dhufte shamarree Hamziyaa Bariisooti.
Konkolaatawwan tola ooltotaa fi waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa deeggarsa yeroo hattatamaa taasisuuf bakka kanajaatti argaman illeen, kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaan hanga walakkeessa guyyaatti rakkoo tokkoo malee ayyaaneeffamee jira.
Kuusaa suuraa, Ayyaanni Irreechaa bara 2017 suuraan yoo ibsamu
Irreecha bara 2016: "Iddoon ija koo itti dhabedha"
'Hongee Booranatti mudateen loon 14,000 du'uun, kumni 30 gargaarsa namaatiin ka'u'
23 Onkololeessa 2021
Kubbaa miillaa Itoophiyaa biyya ormaatti keessummaa ta’ee kessummoota isaa ‘keesssummeessuuf’ dirqame
Poolisiin duraanii Afrikaa Kibbaa maallaqa inshuraansii argachuuf jecha firootashe shan ajjeeste
Barataan 'siyaasaan' Yunivarsiitii Finfinneerraa ari'ame, waggaa 20 booda qabxii olaanaan eebbifame
21 Onkololeessa 2021
'Haleellaan Wallaggatti raawwatamu walitti bu'iinsa sabaatti geeddaramu mala' - KMNI
18 Onkololeessa 2021
Lammii Ertiraa Itoophiyaarraa miliqe Neezarlaandis barbaachatti kaate
20 Onkololeessa 2021
Gargaarsi karaa miidiyaa hawaasummaa Booranaaf walitti qabame akkamiin ummata bira ga'a?
19 Onkololeessa 2021
'Ani waa'ee Booranaa, bishaan Booranaa yoo kaasan imimmaantu na qaba'
Karaawwan hin eegamne ja'a jijjiirama qilleensaa qolachuuf fayyadan
Yuunivarsiitiin Dambi Doolloo Obbo Leencoo Lataaf doktora kabajaa kenne
16 Onkololeessa 2021
Wallagga Bahaa Harootti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefaman
14 Onkololeessa 2021
Namichi bofa ajjeesee ittiin 'moruuf' ture hidhaan adabame
Ministeerri Haajaa Alaa US fi barreessaan ol aanaa UN dhimma Itoophiyaa irratti mar'iatan
UN xiyyaarri deeggarsa fe'e Maqalee qubachuu danqamuu hordofee garasitti balali'uu dhaabe
Raapparii dhalataa Tigraay Ameerikaa keessatti gurra horachuuf tattaafataa jiru
Feesbuuk WBO fi qabiyyeewwan sochiisaa leellisan maalirraa ka'ee uggure?
Maatii waggoota 18 bofa Buutii jedhamu waliin jiraatan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 20 Fuulbaana 2020
Bofti gurguddaa lama baaxiin manaa ittiin jigee abbaa manaa rifachiisan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 1 Fuulbaana 2020